Ciidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinay Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinay...
Ciidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinay Itoobiya
Ciidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinayo. In ka badan 5 kun oo ka tirsanaa ciidamdii hawl gabka noqday ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ku biirista ciidamada si ay qayb uga noqdaan hawl galada ka dhanka ah TPLF.
Ciidamadani ayaa sida la sheegay ka soo qayb qaatay dagaaladii u dhaxeeyay ethiopia iyo Eratareya mudda ka badam 20 sano.
Alemayu Tefese oo ka midda ciidankii hawl gabka noqday ee qaybta ka ahaa dagaaladaasi ayaa xusay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada hawl galka ka dhanka ah TPLF.
Dalabka ciidamadani ayaa imaanaya xili xukuumada dhexe dalku sheegtay inay qaadayso talaabooyin lagu soo Af-jarayo kooxda TPLF taasoo mudo ku siman 9 bilood lagula jiray dagaalo waloo ay xukuumadda abiye bil kahor ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Waxaana dalka badankii ka socda isu soo baxyo lagu taageerayo ciidamada difaaca qaranka lagagana soo hor jeedo TPLF.
By jaamac Ukun
Previous articleWaa ayo Dadka la yidhaahdo Hindida cas-cas
Next articleSuudaan ayaa dib ugu yeertay safiirkii u fadhiyay Itoobiya